🥇 ▷ Rock ee Rio waxay ku tiirsan yihiin barnaamijka iyo aakhiro loo hago si loogu hago kuwa aragga naafo ah ✅
Rock ee Rio waxay ku tiirsan yihiin barnaamijka iyo aakhiro loo hago si loogu hago kuwa aragga naafo ah
Sida dad badani ogyihiin, Rock ee Rio 2019 Waxay ku dhowdahay inay si rasmi ah uga dhacdo dhulka Rio de Janeiro, kaas oo la qabanayo inta u dhexeysa 27 iyo 29 Sebtembar iyo inta u dhaxaysa 3 iyo 6 Oktoobar, oo leh soo jiidasho qaran iyo mid caalami ah.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay, waxaan aragnay inay si tartiib tartiib ah u noqotay mid ka mid ah daabacadihii ugu xirnaa, oo ay kujirto sii deynta “Bandhig Faneedka” ee Tinder iyo iskaashi lala yeesho barnaamijka. Veever, taas oo u oggolaanaysa dadka aragga naafada ahi inay ku dhex socdaan Rock City.
Waxaa sameeyay abuurida Curitiba, barnaamijku wuxuu helay astaamo gaar ahaan Rock ee Rio, ooy kujirto kaliya meelaha meelaha go’an ee madasha sida marxaladaha, musqulaha iyo aagga wax lagu cuno, laakiin sidoo kale sharaxaada maqalka ee jawiga (oo leh midab qeexan). , cabirrada, iyo waxyaabaha xiisaha leh), iyo sidoo kale barnaamijka ku saabsan masraxa ugu dhow aaladda.
Intaa waxaa u dheer, badhanka codsi caawinaad gaar ah ayaa sidoo kale la geliyaa, taas oo keenta in qof ka mid ah kooxda dalabka inuu ku wargaliyo kiniin leh meesha saxda ah ee qofka u baahan caawinta, sidaas darteed u oggolaanaya goob fudud iyo taageero.
Qodob kale oo la xaqiijiyay ayaa ah in la heli doono inta munaasabadda socoto oo dhan, 60 bucano oo bixin doona qoraallo sharraxaya iyada oo la adeegsanayo firfircoonaanta markii loo dhawaado taleefanka casriga, iyaga oo u baahan dalabka in sidaas la sameeyo.
Tusayaashaani waxaa bixiyay Inovatso Soluções em Tecnologia waxaana laga soo saaray lacag kayd ah oo u dhexeysa R $ 3,000 ilaa R $ 4,800, maadaama midkiiba uu u dhexeeyo $ 50 ilaa R $ 80.
Sida laga soo xigtay João Novochadlo, asaaska aasaasiga ee Veever, Rock ee Rio waxaa la filayaa inuu noqdo mid ka mid ah dabbaaldegyada ugu badan ee loogu talagalay kuwa indhaha la ‘iyo kuwa indhaha la’ mustaqbalka.
“Sannad iyo sannadba, Rock in Rio wuxuu horumarinaayey helitaanka munaasabadda, laakiin haddii aad fiiriso, way yar tahay. Waxaan rajeyneynaa in guusha Veever, iiddu ay sii badin doonto dadka indhaha la ‘iyo indhoolayaasha mustaqbalka mustaqbalka. ”
Horeba marka loo eego ururka Rock ee Rio, qiyaasta hadda jirta ayaa ah in qiyaastii 2,000 oo qof oo naafo ah ay ka soo qaybgalaan dhacdada sanadkan.